Izizinda Zokwezifiso ze-WordPress
ULwesihlanu, July 8, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Le nyanga umagazini i-net ufike ngesigaba esihle kuzici zeWordPress 3. Esinye sezici yikhono lokushintsha isithombe sakho sangemuva kutimu yakho. Ikhodi ilula impela. Kufayela lakho lengqikithi imisebenzi.php, engeza umugqa olandelayo:
Uma ingqikithi yakho ingenalo ifayela le-theme works.php, mane ungeze elilodwa! Ifayela letimu elizenzakalelayo elizofakwa yi-WordPress ngokuzenzakalela. Umphumela oqediwe ukuthi manje unenketho yemenyu yangemuva esigabeni sokubukeka sokuphatha: